Ogaden News Agency (ONA) – Laba Baaq oo ku kala socda Barako iyo Balaayo! adigoon layaabin akhriso- By: Xaaji M/rashiid.
Laba Baaq oo ku kala socda Barako iyo Balaayo! adigoon layaabin akhriso- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ February 1, 2018
Laba Baaq oo ku kala socda Barako iyo Balaayo! adigoon layaabin akhriso- By: Xaaji M/rashiid
Afeef: Halgamayaal markaan u baaqayo barako iyo balaayo waan ogahay inay yihiin laba waxyaalood oo ilaahay maamulo, iyaguna kaligood waxay rabaan ma samayn karaan, balse waa inay maraka hore Allewayne fasax ka helaan.
Waxaa dhici karta in akhristuhu layaabo in baaq loo diro labada magac ee dusha ku xusan sababkoo ah muuna arki jirin baaq noocan oo kaleeto ah. Waxaan taas kaga jawaabayaa- waxaa jira duruufo keenay oo hadii laga hadlo waqti dheer qaadanaya. Halgamyaal kahor intaana ubucda usii galin qoraalka aan sharraxaad ka bixiyo labada magac. Waa ka horee Barako waa eray farxad galinaya cid kasta oo muslim ah oo uu dhagaheeda ku dhaco. Shayga barakadu haleesho waa wax nafci badan dad iyo duunyo kuu doono ha ahaadee. Tusaale- Adhigu wuxuu dhalaa 1 ilmo markiiba Bisadaha iyo Ayduna waxay dhalaan dhowr ilmood halkii mar, balse midkee badan? Maxaa Adhiga badiyay oo kadhigay mid Dhulka buuxiyay oo Maraakiibta buuxiyay kuwa kalana yareey oo kadhigay wax in la arkaaba ay adagtahay? Jawaabtu waxaa weeye Adhiga waxaa haleeshay Barako iyagana barako ma haleelin. Waxaad ogaataa Ruuxii Barakada ku qiimeeya caruur badan, maal badan iyo cimri dheer inuuna fahmin Barakada micnaheeda. Sikastaba ha ahaatee barakadu waa wax ayna dadkoo oo dhani wada fami karin.
Waxaa dhici karta markaad maqasho erayga balaayo in xogaa naxdin ahi kusoo gaadho. Waa eray ay naftu necebtahay maqalkiisa. Waa eray ay gudihiisa gali karaan boqolaal dhibaato oo kala duwan, balse isagu hooyo uwada ah nooc kasta oy tahay dhibaatadu. Balaayadu waa aalad kolba meel barida oo soomaalidaaba tidhaaha intay balaayo kaa maqantahay qeyrka ayay ku maqantahay. Wax kasta oo aduunka dulsaaran way ku habstaa markii xag alle laga soo amro, waxaana dhacda inay wax jiray gabi aanba meesha kasaarto, ama ay ugaysato dhaawacyo halis ah. Waxaa badan inaad maqasho Daadad baa wax la tagay, Dabaylaa wax dumiyay, Dab ayaa kacay oo wax halaagay, Cudur baa dadkii laayay IWM. Waxaas oo dhani waa balaayadii oo magacyo loo bixiyay. Sababaha ay kusoo degto waa dadka oo kabaxa dariiqa wanaagsan una baydha dhanka xumaanta ilaahay baan ka magan galee!
BAAQA KUSOCDA BARAKADA
Aniga iyo Barako waxaa na dhexmari doona maanta haasaawe, wada sheekaysi iyo dardaaran intaba kahor intaana u gudbinin baaqayga. Barakooy maanta adigaan marti kuu ahay sooryana waxaan u qaadanayaa inaad codsigayga fuliso. Barakooy Gurigaad gasho wuu barwaaqoobaa, Ruuxa aad dhex gashana waa laga gartaa, maalkaad dhexdegtana wuu bulaalaa. Hadaba barakooy baaqaygu waa inaadan kudegin Magaalada Maqale ee ay kasoo duulaan kooxda woyaanaha ah ee ku caanbaxday gumaadka Haweenka, Caruurta, Odayaasha iyo dhamaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee soomaalida ogadenya. Barookoy waxaa ila quman inaadan agmarin askarta woyaanaha ee ku naaxday dhiiga shacabkanaga ee sida gardarrada ah ku haysta dhulka Ogadenya. Barakooy waad safar iyo socdaal badantahay, balse taasi yayna kugu kalifin inaad martido qowmiyadda Tigreega ee dad cunka ah. Barakooy iska baal mar woyaanaha baradooda, hubkooda ciidankooda, cimrigooda iyo maamulkoodaba.
BAAQA KUSOCDA BALAAYADA
Balaayooy sidaaadaba waad sheeg sheeg badantahay waxaadna ku mutaysatay meeshaad gasho way galantahay, waxaa kale oon kuu sheegi inaad tahay aalad dunidan la factirsatay oo aad u ada’wayn. Waxaa laguugu talo galay inaad wixii kibra abaalkiisa mariso. Waad garan meeshaad la martay fircoon iyo ciidankiisii eed biyaha ugu soo dhex dhuumatay, waad garan meeshaad la martay qoladii Nabi Luud CS, loo diray ee magaalooyinkoodii loo badalay dhiijaan gudhay! Waad gara Qaaruun oo maalkii uu ku kibray meeshaad la martay iyo sidaad abaalkiisa ugu dhakhsatay! Waad garan sidaad u gashay kuwii kusoo duulay Kacbada Eebe ee reer AsxaabulFiil (kooxdii Maroodiga) eed Ninba meel ku toogatay.
Intaasi waa taariikhii hore, balse hadaan balaayooy dib umilicsado kuwii aad cidhibtirtay qarniyadan danbe waxaa kamid ahaa- Ninkii Hitlar la odhan jiray ee shaarubaha dheeraa ee aduunka ku kibray sow adigii isaga iyo maamukiisiiba dhulka lasimay. Waxaa kale oo jiray Qaran loogu yeedhi jiray Midowga Soviet oo isla waynaan jiray oo xoog iyo gardarro ku qabsaday Gobolo ay lahaayeen dad masaakiin ah oo uu aad dhibaato wayn ugu gaystay. Balaayooy waadigii hal Habeen ku duldagay subaxdiina kala diray quwadii mudada dheer la isku soo hayay. Balaayooy ilbax baad tahay oo waxaad ugu soo dhex,dhuumatay Duqii Gerbajoof ahaa ee iyaga xukumayay, nidaamkiina isagaaba gacantiisa ku gawracay!. Balaayooy dulmiga iyo koxihii ku qadhaaban jiray wali dunida way joogaan. Waxaa jira kooxo budhcad ah oo Geeska Afrika kasoo baxay oo layidhaaho Tigree, balase lagu naaneyso Wayaane. Balaayooy aad baad u dhago wadantahay oo warkooda waad haysaa, waxaana filayaa in lajoogo waqtigii aad ka dhex kici lahayd kalana diri laheyd. Wararka isoo gadhaya Balaayooy waxaa kamid ah inaad itoobiya dhexgashay shaqadiina aad bilowday. Waxaa kamida ah shaqada aad ilaa hadda qabatay-Askartii Woyaanaha oo cararaya iyo Xafiisyadoodii oo gubanaya oo qiiq ka oogsaday- baga, baga waad ku sugtay!
Intaa kadib Dardaarakaygu waa inaad bilahan foodda inagu soo haya kala dirto Maamulka macangaga ah. Qoowmiyadba tukale kahorgee! Askariba mid kale kahorgee, Odayba kukale kahorgee, Dumarkooda isku dir oo timaha ha is qabteen! Carruurtooda isku dir oo dhagaxtuur ha iskala daaleen! Balaayooy kuu baaqaye Riximka ufadhiiso haweenkooda oo ha wada dhiciyeen Sanadaha soo socda! Balaayooy kafaraxalo guud ahaan jiritaanka waxa loogu yeedho itoobiya intuuna sanadkani dhamaanin idanka ilaahay!
Akhristayaasha qiimaha iyo qaayaha lahoow waxaad ogtihiin in Riwaayadda markii Atooraheeda la dilo ay soo afjaranto, Geeska Afrikana dhibkii kajiray waxay u muuqdaa inuu soo afjarmay kol haday baroortii TPLF/EPRDF isqabsatay!